Ny orinasanay dia mitazona ny 16th Automekanika Shanghai ao amin'ny National Exhibition and Convention Center (Shanghai) manomboka ny 02 hatramin'ny 05 Desambra 2020
Misaotra betsaka noho ny fanohananao hatrany ny orinasanay,
Amin'ity fotoana ity, Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd. dia maniry ny hanolotra ny fanasana am-pahatsorana ho anao ary manantena ny fitsidihanao.
Ireo indostrian'ny indostrialy izay tsy afaka mitsidika ny sehatra noho ny fameperana ny dia dia afaka mandray anjara amin'ity hetsika indostrialy fiara manerantany ity amin'ny alàlan'ny sehatra an-tserasera AMS Live, izay hisokatra amin'ny 30 Novambra ka hatramin'ny 6 Desambra. Ny sehatra AMS Live dia hanome safidy hafa mety ho an'ny maro. mpijery am-pitan-dranomasina izay tsy afaka mankany amin'ny sehatra.
Ny 16ème Automekanika Shanghai dia antenaina hisarika fampirantiana manodidina ny 3 900 eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny fiara, miaraka amin'ny velaran'ny fampirantiana 280.000 metatra toradroa. Ity fampirantiana ity dia hifantoka tanteraka amin'ny lohahevitry ny "Fananganana Ecosystem automotive automatique ho avy", hanatsara sy hanatsara ny sehatra lehibe fito sy faritra manokana telo ary hampiroborobo ny fampidirana ireo loharanon-karena indostrialy sy ny fampandrosoana ny haitao vaovao.
Amin'izao fotoana izao, ny Automekanika Shanghai no fampirantiana aotomobilina lehibe indrindra sy lehibe indrindra eo amin'ireo fampirantiana automatique aziatika. Izy io dia fampirantiana tena jerena, mitarika ny indostrian'ny fiara ao an-trano sy any ivelany mankany amin'ny hoavin'ny fampandrosoana teknolojia vaovao. Izy io dia mandrakotra ny serivisy varotra fiara isan-karazany indrindra, ary misy fampahalalana marobe momba ny tsena.
Amin'ny maha fampirantiana iraisam-pirenena azy dia manome antsika fomba tena manararaotra hijerena ireo tsena vao misondrotra sy hametrahana fifandraisana akaiky kokoa amin'ny mpanjifa ny Automekanika Shanghai.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nitondra ny mats fiara TPE vokatra lehibe sy ny kojakoja fiara hafa izahay, manantena ny hanitatra ny tsenan'ny varotra, ary miaraka amin'izay dia mifandraisa bebe kokoa amin'ireo mpanjifa tsena tsy voatanisa. Izy io dia manana andraikitra mitarika tsara amin'ny fampandrosoana manaraka ny orinasanay, mba hahazoana ny voka-tsena sy ny fotoana mety hitranga.
Ankehitriny ny tsena fiara dia nitondra fanovana tamin'ny taonjato iray. Amin'ny fandraisana anjara amin'ny Automekanika Shanghai, afaka mihaona tsara kokoa amin'ireo fanamby isika ary mahatakatra ny làlan'ny fampandrosoana amin'ny ho avy eo amin'ny tsena.